မြန်မာသံတော်ဆင့်: " ရိုဟင်ဂျာ" သည်အမျိုးသားလုံခြုံရေးချိမ်းချောက်မှု - National security threat - ဖြစ်သည်
Posted by Myint Shwe at 3:24 PM
Unknown July 17, 2012 at 5:27 PM
very good. I support 100 %.
Anonymous July 19, 2012 at 9:47 PM
I also support full.
Unknown July 19, 2012 at 10:32 PM
ရွှေ့ ပြောင်းစေခြင်းဖြင့်သီးသန့် နယ်မြေစိတ်ကူးယဉ်မှုကိုဖျက်သိမ်းပစ်ရန်ဖြစ်ပါသည်။ )))
ရခိုင်ကို ခံရစေချင်လို့တော့မဟုတ်ပါ။ အဲဒီမှာ မရှင်းဘဲ ဌာနဆိုင်ရာတွေလည်း သေချာမကိုင်တွယ်နိုင်ရင် သူတို့စိတ်ကူးယဉ်တာကို ဖျက်ဆီးရာမကျ တစ်နိုင်ငံလုံးပေးလိုက်ရမည်လား
မထူးပါဘူးသာဂိရာ ၊ ဘင်္ဂလားဘက်ခြမ်းမှာ ပြွတ်သိပ်နေတဲ့ ဘင်္ဂလီမူစလင် သန်း ၄၀ လောက်ကို ပါ ပြည်ထောင်စု၏တိုင်းဒေသကြီး (၇) ခုသို့ လူစုခွဲ၍ ရွှေ့ ပြောင်းစေခြင်းဖြင့်သီးသန့် နယ်မြေစိတ်ကူးယဉ်မှုကို ပိုမို အားပေးလိုက်ပါလား။ စောက်ပေါ ပဲ။
ဦးသိန်းစိန်ကတောင် လုံးဝ လက်မခံပါဘူးပြောပြီးပြီ။ မင်းကျမှ တစ်နိုင်ငံလုံးတောင် ဖြန့်ကျက်ပေးလိုက်အုန်းမယ်
M.Yaqub July 21, 2012 at 9:56 PM
requesting you, pls. briefly explain your articles in English.
You are Awakyunetha Bangali Rakhine Buddhist.
there is no BRB..in myanmar country..there is only Rakhine Budhist...you understand...!!!!
Mary Grace July 24, 2012 at 3:57 AM
ပင်လယ်ထဲက ရေပတ်လည်ဝိုင်းနေတဲ့ ကျွန်းတစ်ခုပေါ်မှာ အားလုံးစုပြီးသာထားလိုက်ပါ..ပြီးရင် သာဆက်ခြားပေးထားလိုက်ပါ ...ကျွန်းပေါ်က ပြေးဖို့ ကြိုးစားရင် ပစ်သတ်ပြစ်ပါ...
kt August 8, 2012 at 11:50 PM
ဒုတိယမေးခွန်းက လုံးဝလက်မခံနိုင်ပါ။ မြွေပွေး ခါးပိုက် ပိုက်တာကမှ ပိုသက်သာပါလိမ့်မည်။ လုံးဝကန့်ကွက်ပါသည်။
ပင်လယ်ထဲက ရေပတ်လည်ဝိုင်းနေတဲ့ ကျွန်းတစ်ခုပေါ်မှာ အားလုံးစုပြီးသာထားလိုက်ပါ..ပြီးရင် သာဆက်ခြားပေးထားလိုက်ပါ ...ကျွန်းပေါ်က ပြေးဖို့ ကြိုးစားရင် ပစ်သတ်ပြစ်ပါ...မှန်၏
htutkhaung kyaw August 20, 2012 at 4:53 PM
Let me express my sincere congratulations, and deep respect. I hope you will appear when our country needs you. Thank you.
Anonymous October 7, 2013 at 2:38 AM
တိုင်းရင်းသားညီအကိုမောင်နှမတွေအားလုံး ဒီဘင်္ဂါလီ အရေးနှင့်ပတ်သက်ပြီးမဆိုင်သလိုမနေကြပါနဲ့ ရခိုင်ပြည်နယ်ဟာလည်းန်ြမာတစ်နိုင်ငံလုံးရဲ့ တစ်စိတ်တစ်ဒေသပါ၊
ဒီလိုဘဲ ရခိုင်တိုင်းရင်းသားညီအကိုမောင်နှမများဟာလည်း ကျွန်တော်တို့ရဲ့တိုင်းရင်းသားမျိုးနွယ်တစ်ခုဖြစ်လို့ပူးပေါင်းပါဝင်ကြပါ၊ မျက်စိပွင့်နားစွန့်ပြီး သတိကြီးစွာနေကြပါလို့အလေးအနက်ထားတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်
fuck all ခွေးမသားဗုဒ္ဓ မအေလိုးကောင် ရခိုင်(ဗုဒ္ဓဘာသာ)လူများစုနှင့်ခွေးမသား မအေလိုးကောင်သင်္ကန်းဝတ်ယောင်ဆောင်သောဘုန်းကြီးများ ခွေးမသားဗမာတွေနဲမအေလိုးကောင် မြန်မာသံတော်ဆင့်နဲ့ မျိုးချစ်မြန်မာစာဆိုတော်ကြီး